Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Netflix sy Chills' dia mitondra ny hafaliana rehetra amin'ny Halloween!
by Waylon Jordan Septambra 7, 2021
by Waylon Jordan Septambra 7, 2021 12,292 hevitra
Tsy maintsy amin'ny volana septambra. Ny serivisy streaming sy ny fantsom-pifandraisana rehetra dia mamoaka ny fandaharan'izy ireo mandritra ny fotoana faran'ny taona, ary eto izahay isaky ny iray minitra. Tsy tokony hatao ankilabao, Netflix sy Chills dia miverina indray miaraka amin'ny programa vaovao sy manaitaitra mandritra ny volana septambra sy oktobra.
Tsy ny andiany vaovao ihany no anombohan'izy ireo, fa isaky ny alarobia, ilay goavana goavam-be dia hanomboka sarimihetsika mampatahotra vaovao hahafahany miverina bebe kokoa mandritra ny vanim-potoana. Avy amin'ny sarimihetsika ho an'ny fianakaviana ka hatramin'ny horohoro henjana, Netflix sy Chills manana zavatra ho an'ny rehetra.
Topazo maso ireo fialamboly ho avy rehetra eto ambany ary aza adino ny maka ny sary eo ambany mba hahazoana toro-lalana haingana!
Netflix sy Chills septambra 2021
8 septambra, Mandritra ny alina Vanim-potoana 2:
Raha mamela ny mpandeha fiaramanidina 21 izahay amin'ny faran'ny vanim-potoana faha-1 izay nahita fialofana farany tamin'ny masoandro tao amin'ny bunker miaramila sovietika taloha tany Bulgaria, indrisy fa tapaka ny fijanonan'izy ireo rehefa nisy lozam-pifamoivoizana nanimba ny ampahany tamin'ny sakafom-bolan'izy ireo. Nenjehina tampoka avy eny ambonin'ny tany izy ireo, tsy maintsy mandeha any amin'ny Global Seed Vault any Norvezy izy ireo ho fikasana mafy hamonjy ny fahavelomany. Saingy tsy izy ireo irery no manana an'io hevitra io… Amin'ny anaran'ny tsaratsara kokoa, ny vondrona misy antsika dia mila misaraka, milalao tsara amin'ireo ekipa miaramila mampiantrano, ary manao sorona amin'ny hazakazaka mifanohitra amin'ny fotoana.
10 septambra, Losifera Fotoana farany:
Ity no, ny vanim-potoana farany an'i Losifera. Ho an'ny tena izy amin'ity indray mitoraka ity. Ny devoly mihitsy no tonga Andriamanitra… saika. Fa maninona izy no misalasala? Ary rehefa manomboka mivelatra izao tontolo izao raha tsy misy Andriamanitra, inona no hataony ho setrin'izany? Miaraha aminay rehefa milaza ny fanaovam-beloma mangidy ho an'i Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella ary Dan. Mitondrà sela.
10 septambra, Prey:
Tamin'ny faran'ny herinandro faran'ny fetiny, Roman, ny rahalahiny Albert sy ny namany dia nandeha fitsangatsangana tany anaty ala. Rehefa maheno feom-basy eo akaiky eo ny vondrona, dia ataon'izy ireo amin'ny mpihaza any an'ala izany. Saingy, tsy ela izy ireo dia nahita ny tenany ho amin'ny filam-paty mafy hahazoana ny fahavelomany rehefa tsapan'izy ireo fa lasa mpitifitra miafina izy ireo.
Roman (David Kross), Albert (Hanno Koffler), Peter (Robert Finster) ao amin'ny Prey amin'ny Netflix sy Chills
15 septambra, Boky fitsangatsanganana:
Rehefa Alex (Winslow Fegley), zazalahy variana amin'ny tantara mampatahotra, dia voafandriky ny mpamosavy ratsy fanahy (Krysten Ritter) tao amin'ny efitranony mahagaga, ary tsy maintsy milaza tantara mampatahotra isan'alina mba hijanonany velona, ​​dia miara-miasa amina gadra hafa iray izy, Yasmin ( Lidya Jewett), mitady fomba handosirana.
17 septambra, Lalao Squid:
Ny fanasana miafina mba hiditra amin'ny lalao dia alefa amin'ireo olona tandindomin-doza izay tena mila vola. Mpandray anjara 456 avy amin'ny fari-piainana rehetra dia voahidy anaty toerana miafina izay nilalaovany lalao hahazoana 45.6 miliara won. Ny lalao rehetra dia lalao nentin-drazana Koreana nentim-paharazana toy ny Red Light, Green Light, fa ny vokatry ny famoizana dia ny fahafatesana. Iza no handresy, ary inona no tanjona ao ambadik'ity lalao ity?
22 septambra fitsabahana:
Rehefa mifindra any amin'ny tanàna kely ny mpivady dia manafika ilay vehivavy ary miahiahy sao tsy ho toa azy ireo ny manodidina azy.
24 septambra, Lamesa misasakalina:
From The Haunting of Hill House mpamorona Mike Flanagan, LASA MAMATONANA milaza ny tantaran'ny vondrom-piarahamonina nosy kely iray mitoka-monina izay nohamafisin'ny fisarahan'ny tovolahy iray nanala baraka (Zach Gilford) sy ny fahatongavan'ilay pretra manintona (Hamish Linklater). Rehefa nifanindry tamina fisehoan-javatra tsy fantatra sy toa fahagagana ny fisehoan'i Mompera Paul tany amin'ny nosy Crockett, dia nirongatra ny fiarahamonina iray ny hafanam-pinoana vaovao - nefa ve misy vokany lafo ireo fahagagana ireo?
29 septambra, Ilay Lehilahy Chestnut:
The Chestnut Man dia miorina amin'ny tanàna mangina any Copenhagen, toerana nahitan'ny polisy fahagagana tamin'ny Oktobra maraina. Vehivavy tanora iray no nisy novonoina tamin-kabibiana tany amin'ny kianja filalaovana ary tsy hita ny iray tanany. Eo anilany no misy lehilahy kely vita amin'ny chestnuts. Ilay tanora mpitsikilo be fatratra Naia Thulin (Danica Curcic) dia voatendry hiatrika ny raharaha, miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy vaovao, Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Tsy ela dia nahita porofo tsy fantatra momba ilay lehilahy chestnut izy ireo - porofo mampifandray izany amin'ny tovovavy iray izay tsy hita herintaona talohan'izay ary noheverina ho maty - zanakavavin'ny mpanao politika Rosa Hartung (Iben Dorner).
29 septambra, Tsy misy olona afaka miaina velona:
Ambar dia mpifindra monina mitady ny nofinofy amerikanina, saingy rehefa noterena haka efitrano tao amin'ny trano fandraisam-bahiny izy, dia nahita nofinofy tsy afa-nitsoaka.
Netflix sy Chills Oktobra 2021
1 Oktobra, Saka scaredy:
Tamin'ny tsingerintaona faha-12 taonany, Willa Ward dia nahazo fanomezana purr-fect izay manokatra tontolon'ny famosaviana, miresaka biby ary betsaka amin'ireo namany akaiky indrindra.
5 Oktobra, Mandosira ny Undertaker:
Afaka miaritra ny tsy ampoizina ao amin'ny tranon'ny The Undertaker ve ny Andro Vaovao? Anjaranao ny manapa-kevitra ny amin'ny hoavin'izy ireo amin'ity miavaka mifandraika amin'ny WWE ity.
Mandosira ny Undertaker. (LR) Big E, Xavier Woods, Kofi Kingston ary The Undertaker ao amin'ny Escape The Undertaker. d. Netflix © 2021
6 Oktobra, Misy olona ao an-tranonao:
Nifindra avy tany Hawaii hankany Nebraska, tanàna kely mangina i Makani Young hiaina miaraka amin'ny renibeny ary hamita ny fianarany amin'ny lisea, saingy rehefa manomboka ny fanombohana ny diplaoma dia voataon'ny mpamono olona ny mpiara-mianatra aminy hampiharihary ny tsiambaratelon'izy ireo maizina indrindra amin'ny tanàna iray manontolo, mampihorohoro niharam-boina nefa nanao saron-tava ny endriny. Miaraka amin'ny lasa miafina azy manokana, Makani sy ny namany dia tsy maintsy mahita ny mpamono alohan'ny hahatongavan'izy ireo ho tra-boina. MISY olona ao anatin'ny tranonao dia miorina amin'ny New York Times an'i Stephanie Perkins izay be mpividy indrindra mitovy anarana aminy ary nosoratan'i Henry Gayden ho an'ny efijery (Shazam!), notarihin'i Patrick Brice (mikisaka) ary novokarin'i James Wan's Atomic Monster (The Conjuring) ary Shawn Levy's 21 Laps (vahiny Things). (Tsy misy sary Netflix na Chills na tranofiara misy amin'izao fotoana izao.)
8 Oktobra, Maizina sy malahelo:
Araho i Hansel sy Gretel rehefa mivoaka ny tantarany izy ireo amin'ny tantara tsy ampoizina mifangidihidy feno hafahafa - sy mampatahotra.
13 Oktobra, Fever Dream:
Tovovavy iray mandry maty lavitra ny tranony. Misy zazalahy mipetraka eo akaikiny. Tsy reniny izy. Tsy zanany izy. Miara-mitantara ny tantaran'ny fanahy torotoro sy fandrahonana tsy hita maso ary ny hery sy famoizam-po ao amin'ny fianakaviana izy ireo. Miorina amin'ny tantara nosoratan'i Samanta Schweblin eken'ny tsikera iraisam-pirenena.
FEVER DREAM (L to R) Emilio Vodanovich as David and María Valverde as Amanda in FEVER DREAM. Cr. NETFLIX © 2021
15 Oktobra, Halloween Fintastic an'i Sharkdog:
Ny hybrid / alika sy alika ankafizin'ny rehetra dia miomana amin'ny fanjonoany manokana Halloween!
15 Oktobra, ianao Season 3:
Ao amin'ny Andiany 3, Joe sy Love, manambady sy mitaiza ny zanany izao, dia nifindra tany amin'ny toeram-ponenan'i Madre Linda any Kalifornia, izay nohodidinin'ireo mpandraharaha ara-teknolojia manana tombony, bilaogera renim-pianakaviana mpitsara ary biohacker malaza Insta. Joe dia manolo-tena amin'ny anjara asany vaovao amin'ny maha vady sy raim-pianakaviana azy saingy matahotra ny fanetsehana mahafaty an'i Love. Ary avy eo ao ny fony. Mety ho mipetraka eo akaikin'ny trano akaiky ve ilay vehivavy notadiaviny nandritra an'ity fotoana ity? Ny fialana ivelan'ny tranom-borona ao amin'ny lakaly iray dia zavatra iray. Fa ny fonja fanambadiana tonga lafatra amin'ny vehivavy hendry amin'ny hafetsenao? Eny, izany dia hanaporofo ny fandosirana sarotra kokoa.
20 Oktobra, Nify alina:
Mba ahazoana vola fanampiny, ny mpianatra eny amin'ny oniversite Benny (Jorge Lendeborg, Jr) dia mpanazava mandritra ny iray alina. Ny asany: mitondra fiara tovovavy roa mifono mistery (Debby Ryan sy Lucy Fry) manodidina an'i Los Angeles mandritra ny alina fitsangantsanganana. Nentin'ny fanintelon'ny mpanjifany izy, tsy ela dia fantany fa manana ny tanjon'izy ireo ho azy ny mpandeha azy - ary mangetaheta ra tsy mety afa-po. Rehefa tsy voafehy ny alina, dia natsipy tao anatin'ny ady mangitsokitsoka i Benny izay niady tamin'ny foko vampira mifanohitra amin'ireo mpiaro ny tontolon'olombelona, ​​notarihin'ny rahalahiny (Raúl Castillo), izay tsy hijanona na inona na inona hamerina azy ireo mankamin'ny aloka. Manakaiky haingana ny fiposahan'ny masoandro dia voatery misafidy i Benny na tahotra na fakam-panahy raha te hijanona ho velona sy hamonjy ny Tanànan'ny anjely.
NET TEETH (2021)
27 Oktobra, milamindamina:
Kate Siegel, Jason O'Mara, ary Dule Hill dia kintana amin'ity sarimihetsika ity momba ny vehivavy iray izay nahazo mihoatra ny nohafarany rehefa mitady ny fanampian'ny hypnotherapist izy.
Oktobra TBD, Locke & Key Vanim-potoana 2:
Ny vanim-potoana faharoa dia mitondra ireo mpiray tampo amin'i Locke eny am-pitetezana hahita ny tsiambaratelon'ny fananan'ny fianakaviany.
Oktobra TBD, Tsy misy olona matory any anaty ala anio alina, Tapany 2:
Tohin'ny horonantsary horonantsary nampihoron-koditra tamin'ny taona 2020, Tsy misy olona matory any anaty ala